Ngingaba ukuya esontweni uphungula izinwele indoda? Kunengqondo ukuba uthole impendulo yalo mbuzo ulula. Kodwa iqiniso liwukuthi yilowo nalowo mpristi has umbono wakhe uxakekile eholela emagama ezithile. Ngakho masizame ukuthola impendulo ngokwakho.
Ngokombono zokuziphatha umbono ...
Abantu abaningi-Orthodox phezu mbuzo: "Ingabe indoda uphungula izinwele esontweni" - ukusho ngokuqondile: "Cha!" Phela, ezingqondweni zabo, lesi sici wezigqoko elihlobene ne zilwane okungalungile, zona ngokwazo ubonisa ukwedelela uNkulunkulu. Futhi kule bangakuqonda lokho, ngoba isikhindi uhlobo "kokungenzi lutho" zokugqoka.
Ukuze uqonde kangcono okwamanje interview e enkampanini enkulu. Phakathi ibhoduluko ibhizinisi, abantu amasudi ibhizinisi balinde ukhetho entsha okuthunyelwe yomphathi, bese liqhumise kumuntu umnyango, begqoke emfushane lolwandle izikhindi. Ngokwemvelo, uhlamvu enjalo endabeni engcono uzocelwa ukuhamba, futhi neze - kuzoveza umnyango. Phela, eqinisweni yena dengwane yonke imithetho kahle kanye nje engafuni ukubonisa inhlonipho kwabanye.
Ngakho isiphetho ngempela sobala: uma zisetshenziswa abantu ukuhambisana yokugqoka emhlanganweni yebandla, ngisho nalapho ngokuvakashela indlu yeNkosi, nabo abanayo ukuwuchitha. Uma kungenjalo, khona kuvela ukuthi ikholwa ubeka imithetho yezwe ngenhla ebonisa ikhono lokungacasuli ezingokomoya.
Umbono wezazi nezazi
IBhayibheli libuye libe isiqondiso mayelana nokuthi amadoda kungaba isonto e izikhindi. Ngokwemvelo, kuthiwa akukho ngqo, kodwa umcondvo lobalulekile umyalezo ongcwele libhekwa ezingaphezu kuka ecacile. Njengoba isibonelo izazi main ngokuvamile iholela umugqa we-New Testament, lichaza ukuhlangana St uPetru noJesu.
Kuzo, umfundi efunda indlela uKristu okokuqala beckons ukuba umfundi wakhe omusha, rybachaschego lomfula. Kodwa lokhu akusho ukuthi alinge asondele kuye njengoba bemi isigamu-nqunu emanzini. begqoke kuphela, uPetru odlula uJesu akanamahloni ukubonakala kwakhe (okwengeziwe ngale ekutshela eVangelini likaJohane 21: 1-7). Le ndaba lisifundisa ukuthi ukuhlangabezana uNkulunkulu kufanele eze kuphela izimpahla ezikahle, ngoba kubonisa ukuthi wayeqotho ukholo lwethu langenhlonipho.
Ngaphezu kwalokho, kukhona imigqa eziningi ezivela encwadini yamaHubo ukuthi ukhulume ukuthi kungenzeka ngoba amadoda esontweni izikhindi. Ngokuvamile, ima kwelokuthi ukuthi iyiphi ukushaywa ethempelini - waleli engcwele. Futhi ukubukeka umuntu kumelwe ilingane ngokugcwele ezingeni kwalo mcimbi.
Indlela ukubheka lo mbuzo labapristi bama-Orthodox?
On umbuzo: "Kungenzeka yini amadoda esontweni izikhindi" - yezinceku zeNkosi wayevame ukuthi: "Singayiphuza." Lokhu kungenxa yokuthi abaluleke ukudlula athi ukholo lomuntu kunendlela esiqaleka ngayo. Ngakho-ke, ngisho noma umuntu eza esontweni izikhindi, uzabe athole isibusiso sobupristi nesiqondiso.
Noma kunjalo, namanje musa batusa ukuba aphathe lesi inhlobo yento kalula kanjalo. Phela, ngisho kakhulu ukushisa abantu abagqoka amabhulukwe ukukhanya, okuyinto avele axazulule inkinga yayo. zimbi kakhulu wukuthi eziningi ukuguga okukhethekile izingubo esifushane, ukuze ukugqama esixukwini. Kulokhu, isenzo sabo kuyisono, ngoba kusekelwe yokuziqhenya futhi kuyize.
Ngakho uma amadoda kungaba isonto e izikhindi?
Efingqa bonke ngenhla, singasho ngokuqiniseka ukuthi akekho azenqabelayo indoda ukuya esontweni e izikhindi. Nokho, ngokombono zokuziphatha canons benkolo ukwenza lokho, ukusho okungenani, imprudent. Phela, indlela izingubo umuntu ubonisa indlela okuhlobana ngayo uNkulunkulu uye endaweni emhlabeni.
Njengoba i okuhlukile, ungamukela isimo, lapho indoda yenza kanjalo engahlosile. Ngokwesibonelo, ukhetha ukuhamba emzini, kuyintando ukudalelwa kuvela ukuthi eliseduze kwethempeli. Kulokhu, ukubukeka akufanele ayeke ethembekileyo isifiso ukukhuluma uMdali insimu yalo. Kufanele kuqondwe ukuthi ubuqotho umphefumulo uhlale ukubukeka kakhulu kunalokhu futhi izingubo lomuntu.
Lokhu inhlangano yenkolo - Isonto kaNkulunkulu (Yaroslavl)?
Okhi kweMamre amazwi angcwele lamaKristu
Umsebenzi wayo ongokomoya - iyingxenye ebalulekile yokuphila komuntu
Umlando weSonto Lobu-Orthodox. Ukwethulwa sabefundisi eRussia
Uju nge jelly royal: izakhiwo ewusizo. Uju nge jelly royal: zokupheka, izici, izici
Yesibili yomusho - isihluthulelo ukuba khona iziphakamiso ezivamile
Ukudluliselwa ebhange - ukulethwa imali kahle
Remedy ngoba umkhuhlane "Vibrocil" izingane. Ukubuyekeza, izimpawu, contraindications,
Kufanele uthenga isifutho "Rinofluimutsil" izingane, noma ube Izimo?
Amaphilisi e-garlic: imiyalo yokusetshenziswa, izakhiwo, izinkomba nokuphikisana